Talooyin: Dareenka Sunta: Saddexda Calaamadood ee Muhiimka ah - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » QODOBO Talooyin: Dareenka Sunta: Saddexda Calaamadaha Badbaadada ee Muhiimka ah
Talooyin: Dareemida Saamaynta: Saddexda Calaamadaha Badbaadada ee Muhiimka ah
Dareenka sunta ah: saddexda calaamadood ee ugu muhiimsan ee maskaxdu waxay u egtahay mid aad u xanaaq badan
Abriil 2, 2019 11: 11 By Fabiosa
Dadka qaarkood waxay tixgeliyaan hinaaso sida calaamad u ah is-wacyiga; Dadka kale waxay u maleynayaan inay tahay cudur ku dhaca qofka, haddii ay jecel yihiin iyo in kale. Noqo sida ay suurta gal u tahay, dadka qaarkiis oo kaliya ma istaagi karaan guusha kuwa kale.
Waxaan abuuray nooca " horoscope ee rabitaanka, "kaas oo aan kuu sheegi doono calaamadaha ay dareemaan dareenkooda inta badan kuwa kale.
3 calaamadaha ah Burji ugu xanaaq badan
Waa arrin caadi u ah dadka calaamadahan ah inay dareemaan masayr iyo xaasidnimo. Waqtiga intiisa badan, sababtu waa awood la'aanta inay ku kalsoonaadaan dadka. Cagajuglayaasha ma qarin karaan dareenkooda, sidaa daraadeed dadka ku hareereysan waxay runtii og yihiin waxa ay ka fekerayaan guushooda.
Bikradaha marwalba way isdajiraan waxayna u muuqdaan inay masayrsan yihiin qofkasta oo ay u arkaan in ay xaalad wanaagsan tahay, si kastaba. Dumarku waxay qaadaan guusha dadka kale waxayna jirrabaan illaa ay ka helaan natiijooyin ka fiican inta ay ka sameeynayaan isla goobta. Hase yeeshee, dadka calaamaddani marnaba ma qirayaan in guushooda ay tahay natiijada rabitaankooda.
Dadka ku dhasha calaamadahan waxay guud ahaan yihiin kuwo aan fiicneyn oo muuqaal leh. Gemini wuxuu inta badan ku nool yahay waxa ay dadka kale leeyihiin halkii ay ku qancin lahaayeen waxa ay qabaan. Tusaale ahaan, Gemini waxaa laga yaabaa in uu rabo gaariga ugu quruxda badan sababtoo ah asxaab ama saaxiibo ayaa u iibsaday. Waxay ku qanacsan yihiin oo kaliya markii ay dadka kale ka sarreeyaan.
Evgenii iyo / Shutterstock.com
Ma waxaad tahay mid ka mid ah kuwa aad jeceshahay liiskaan? Ma inta badan ma noqotaa mid cagaaran oo xaasid ah? Noo sheeg faallooyinka!
Maqaalkan waxaa loogu talogalay ujeedooyinka macluumaadka kaliya. Guddiga Xukunka ma damaanad qaadaan wax natiijo ah mana qabsanayo mas'uuliyad ka saaran wax kasta oo nacayb ama cawaaqibyo kale oo ka dhasha isticmaalka macluumaadka lagu bixiyey qodobkan.
Cuntadani waxay u sameysaa maalmo 2 waxay ka nadiifisaa jirkaaga dhammaan sunta - SANTE PLUS MAG